‘स्टाइलिस प्रफमेर डे’ को उपाधि रविलाई ! [भिडियोसहित] - Everest Dainik - News from Nepal
‘स्टाइलिस प्रफमेर डे’ को उपाधि रविलाई ! [भिडियोसहित]
काठमाडौं, कार्तिक २४ । एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको ‘नेपाल आइडल सिजन-२’ अन्तर्गत शुक्रबारआइडलका प्रतिस्पर्धी रवि ओड ‘स्टाइलिस प्रफमेर अफ दि डे’ बनेका छन् । उत्कृष्ट प्रस्तुतिकै कारण उनी बिहीबार ‘स्टाइलिस प्रफमेर अफ दि डे’ बनेका हुन् ।
रवि र सुमित पाठकले संयुक्तरुपमा सुगम पोखरेलको चर्चित तिहार गीत ‘वर्ष र दिनमा लैलै’ गाएका थिए । रविको प्रस्तुति विगत अंकभन्दा अझैँ बिहीबार झन् राम्रो थियो । यो कुरा आइडलका निर्णायकले पनि भने थिए ।
याे पनि पढ्नुस सुमित पाठकलाई झापामा भव्य स्वागत [फोटोफिचर]
निर्णायक मध्येका न्यू बर्जाचार्याले भने, ‘रवि तिमी यस्तो खालको गीत त एकदमै राम्रो छौं, खुसी लाग्छ मलाई ।’ यस्तै, न्यूले सुमितबारे भने, ‘जस्तोसुकै गीत पनि सुमितले प्रेमले गाउँछ । तिमी जुन ठाउँबाट आयौ नि ? तिम्रो जग नै एकदम बलियो छ जस्तो लाग्छ मलाई ।’
याे पनि पढ्नुस नेकपा नेता भीम रावल ‘नेपाल आइडल’ रविका लागि गीत लेख्दै !
अर्का निर्णायक इन्दिरा जोशीले रविको प्रस्तुतिबारेयस्तो भनिन्, ‘रवि यो चाहिँ तपाइँकै गित हो । एकदमै धेरै आत्मविश्वासका साथ गाउनुभयो ।’ जे गाउँनुपर्छ त्यही बन्नुहुन्छ । मलाई यो प्रस्तुति असाध्यै मन पर्यो ।’ बिहीबार भाइटीका परेको थियो । यस अवसरमा प्रतिस्पर्धीका आफन्त पनि नेपाल आइडलमा पुगेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस रविको कलालाई क्षेत्रीयताको जाँतोमा पिस्‍न खोज्‍नु मानसिक दरिद्रता